Wararka Maanta: Khamiis, Apr 4 , 2013-Ra’iisul Wasaarihii Hore ee Soomaaliya oo ku Boorriyay Dowladda Federaalka inay Taageerto Shirka ka socda Kismaayo
Cumar C/rshiid oo la hadlayay idaacadda VOA-da ayaa sheegay in sababta uu u joogo Kismaayo ay tahay sidii uu goobjoog uga noqon lahaa maamulka ay sameysanayaan shacabka Jubbooyinka iyo Gedo, isagoo xusay inuu wax ka ogaa howshan billowgeeda uuna doonayo inuu goobjoog ka ahaado gabo-gabadeeda.
“Dowladda Federaalka Soomaaliya waxaan kula talinayaa inay taageerto shirka maamulka loogu sameynayo Jubbooyinka, maadaama dastuurka uu qorayo in laba gobol iyo wixii ka badan ay sameysan karaan maamul goboleed hoos imaanaya dowladda,” ayuu yiri Cumar C/rashiid.
Sidoo klae, wuxuu sheegay in maamul sameyntaan aysan ahayn mid ka horimaanaysa dastuurka sida ay ku andacoonayso dowladda, isagoo xusay in shirkan uusan ahayn mid ka horimaanaya dastuurka.
“Waxay ahayd in dowladda ay u duceyso maadaama shacabka Jubbooyinka ay go’aansadeen inay sameystaan maamul iyagoo heshiis ah, waayo waxaa la xusuustaa in 20-kii sano ee lasoo dhaafay ay deegaannadan ahaayeen kuwo ay dagaallo sokeeyo ka dhaceen,” ayuu yiri Cumar C/rashiid.
Xukuumadda Soomaaliya ayaa sheegtay in shirka maamul u sameynta Jubbooyinka uu yahay mid ka horimaanaya dastuurka dalka u degsan, iyadoo shalay ay degmadaas gaareen in ka badan 40 xildhibaan oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya.
Ra’iisul wasaaraha Soomaaliya, Cabdi Faarax Shirdoon (Saacid) iyo xubno ka tirsan golihiisa wasiirrada oo toddobaadkii hore tagay degmada Kismaayo ayaa waxay shirka Jubbooyinka ku tilmaameen mid aan dastuurka dalka u degsan waafaqsanayn.
4/4/2013 1:11 AM EST